तलब खाने मुसालाई नै बन्दि बनाएपछी - E Net Nepal
Home Amazing World तलब खाने मुसालाई नै बन्दि बनाएपछी
तलब खाने मुसालाई नै बन्दि बनाएपछी
E NET NEPAL 10:01 PM Amazing World,
मरीमरी काम गरेर बल्ल बल्ल आएको तलब यदि कसैले पचाईदियो भने तपाईलाई कस्तो लाग्छ ? तपाईको तलब पचाउने मान्छे वा नाश गरिदिने जनावर भेट्नु भयो भने के गर्नुहुन्छ ? पक्कै पनि त्योसंग झगडा गर्नुहुन्छ र जनावर छ भने एकदुई थप्पड लगाउनुहुन्छ होला। अनि यदि त्यो जनावर छ र त्यो जनावर मुसा हो भने तपाई के गर्नुहुन्छ? पक्कै पनि त्यसलाई बिष खुवाएर मार्ने विचार सम्म गर्नुहुन्छ होला। तर तपाई सोच्न पनि सक्नुहुन्न कि मुसालाई बाँधेर संजाय दिनुपर्छ।
तर प्यालेस्टाइनका एक मुस्लिमले भने यस्तै सोचे र गरे पनि। प्यालेस्टाइनको Hebron – West Bankमा बस्ने उनले मुसालाई कैद गरेर बन्दि बनाए। एक हप्ताको तलब आएका नोटहरु, जसलाई उनले एकदमै जतनले राखेका थिए, मध्येमा तीनवटा नोटहरु मुसाले खाइदिएपछि उनले रिसाएर मुसालाई पातलो डोरीले बाँधेर राखेका हुन। घटनालाई लिएर विभिन्न किसिमका भनाइहरु आइरहेका छन्। जसमध्ये एउटामा भनिएको छ कि, 'यो मुद्धालाइ युएन जनरल एसेम्बली र सुरक्षा परिषदमा उठाउन पर्छ र सुरक्षा परिषदले तुरुन्त मुसालाई रिहा गराउन कदम चाल्नु पर्छ।'
त्यस्तै अर्को भनेमा भने प्यालेस्टाइनि पब्लिक वर्करलाई पैसाको कति महत्व छ भन्ने कुरा यो रमाइलो घटनाले बताउँछ, भनिएको छ।
त्यस्तै गरि केहि कमेन्टहरुमा भने प्राणीहरुमाथि त्यस्तो व्यवहार सह्य नहुने भन्दै मुसालाई तुरुन्त रिहा गर्नु पर्ने पनि उल्लेख छ। केहि मिडियाहरुले भने यसलाई इजरायली कब्जामा रहेको प्यालेस्टाइनको क्षेत्रको खराब हालत दर्साउने घटनासंग यसको तुलना गरेका छन्।
प्यालेस्टाइनि नेशनल अथोरिटी West Bankक्षेत्रमा पब्लिक वर्करको तलब ढिला दिने गर्छन किनकि इजरायलीहरु यहाँ आउने प्यालेस्टाइनि फण्डलाई यहाँ आउनबाट रोकिदिन्छन।
By E NET NEPAL at 10:01 PM